Qarax labaad oo ka dhacay duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaQarax labaad oo ka dhacay duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe
Hiiraan Xog, Feb 12 , 2018:- Qarax Miino ayaa markale ka dhacay duleedka magaalada Balcad,waxaana lagu weeraray Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM oo marayay duleedka degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Qaraxan oo nuuciisa uu ahaa Miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu qabsaday mid ka mid ah kolonyada Ciidanka AMISOM, xilli uu marayay degaanka Il-baq oo ku yaalla duleedka magaalada Balcad, sida ay inoo sheegeen dadka degaanka.
Qaraxa kadib Ciidamada Midowga Afirka ee AMISOM ayaa la sheegay inay fureen rasaas, taasi oo ay kaga jawaabayeen Qaraxa Miinada ah ee lala eegtay, inkastoo rasaastaasi aysan jirin cid wax ku noqotay.
Ilaa hadda si dhab ah looma oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxan, waxaana warar horudhac ah oo soo baxaya ay sheegayaan in Qaraxan uu khasaare ka soo gaaray Ciidanka AMISOM.
Ciidamo Soomaali ah ayaa la socday ciidanka AMISOM xilliga qaraxaan lagula eegtay inta u dhaxeysa degaanada Haansheekh iyo Golaley oo degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Ra’iisul wasaare Khayre oo dhowr Arrimood ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed